Kooxda Dortmund oo qarax lala beegsaday xilli ay ku sii jeedeen garoonkooda · Jowhar.com Somali News Leader
Kooxda Dortmund oo qarax lala beegsaday xilli ay ku sii jeedeen garoonkooda
by mahad | Tuesday, Apr 11, 2017 | 5009 views
April 11 (Jowhar)— Kooxda Borussia Dortmund ee ka dhisan dalka Jarmalka ayaa bam lagu tuuray gaarigii u waday garoon ay kula balansanaayeen kooxda AS Monaco tartanka Horyaalka Yurub iyadoo mid kamid ah ciyaartoyda kooxda Dortmund uu dhaawac soo gaaray.
Kooxda Dortmund ayaa xaqiijisay in saddex qarax kooxdeeda lala beegsaday waxaana qoraal ka soo baxay Dortmund lagu yiri: “Waxaan xaqiijinaynaa in guud ahaan saddex qarax ay ka dhaceen goobta uu joogay baska teamka”.
Waxaa la xaqiijiyay in difaaca kooxda Borussia Dortmund iyo xulka qaranka Spain ee Marc Bartra uu dhaawac ka soo gaaray qaraxan isla markaana cisbitaalka la dhigay. Wararka ayaa sheegaya in xaalada Marc Bartra ay fiican tahay isla markaana ay degan tahay.
Booliiska ayaa baaritaano wada waxaana la sugayaa in ay war rasmi ah ka soo saaraan sida dhabta ah ee ay wax u dhaceen iyo xaalada guud.
Qoraal ay soo saartay kooxda Dortmund ayaa lagu yiri: ” Kulankii u dhexeeyay Borussia Dortmund iyo AS Monaco waa la kansalay. Waqti cusub waxa uu noqon doonaa Arbacada 12:04 ama 18:45. Tikidhadu waxay sii ahaan doonaan kuwa shaqeeya. Waxaanu idinkula talinaynaa in aad baaqi ku sii ahaataan garoonka oo aad deganaataan si loo hubiyo ka bixitaanka waad mahadsan tihiin”.
Weriye si toos ah taleefishin war uga aqrinaysay oo ogaatay dhimashada seygeedii
Waddooyinka Muqdisho oo berri la xirayo iyo dowladda oo cudurdaar ka bixisay